महिलाले हस्तमैथुन गर्न हुन्छ वा हुँदैन ? - गोकर्णेश्वर खबर
१बाढी/पहिरो आउने सम्भावना कायमै रहेकोले उच्च जोखिमका घरमा नबस्न मेलम्ची नगरपालिकाको अपिल
२सत्ता गठबन्धनको कार्यदल बैठक आज पनि बस्दै,न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास
३रक्षामन्त्रीको घरमा हतियारधारी समूहको आक्रमण, चार जनाको मृत्यु
४एनआरएनए चेक गणतन्त्रको उपाध्यक्षमा लामा,नेपालीहरुको पीडामा मलम लगाउनु पहिलो प्राथमिकता
५गोकर्णेश्वरद्धारा आफ्नै नगर स्काउट समिती गठन,संयोजकमा सुरेश कुमार खड्का
६२४ घन्टामा थपिए ३,३८३ संक्रमित, २४ जनाको मृत्यु
७कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
८काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता थप (आदेशसहित)
आज: २० श्रावण २०७८, बुधबार | Wed, 04, Aug, 2021 Gokarneshwor TV HD
महिलाले हस्तमैथुन गर्न हुन्छ वा हुँदैन ?
गोकर्णेश्वर खबर२ श्रावण २०७८, शनिबार १९:०२ मा प्रकाशित (२ हफ्ता अघि) १२३ पाठक संख्या
काठमाडौं । म २५ वर्षकी भएँ । मलाई याद छ कि पुरुषहरु विद्यालयमा हस्तमैथुनबारे खुलेर कुरा गर्थे । तर, केटीहरु ? स्पष्ट छ उनीहरुलाई यसको लागि स्वतन्त्रता छैन । यदि कुनै केटाले हामी सबैजसो केटीहरुलाई हस्तमैथुनको बारेमा सोधे भने हाम्रो जवाफ हुन्छ, ‘गरेको छैन, यो अश्लील हो ।’ हामी हस्तमैथुन गर्नेले पनि जवाफ यस्तै दिने गर्छौं ।
जबकि यही प्रश्न कुनै केटालाई सोधियो भने उनले धक नमानी भन्नेछन्, ‘लुकाउने कुरा के छ र ? हस्तमैथुन गर्छु ।’ यी जवाफहरुबाट के भेउ मिल्छ भने, महिलामा कामुकता हुँदैन र यस सन्दर्भमा पुरुष अगाडि छन् ।
हानिकारक छ ?
जो युवती हस्तमैथुन गर्छन् उनीहरु यस्तो कुरा गर्न लजाउँछन् । तर, पुरुषको हकमा यस्तो छैन । म त्यस्तै किशोरी थिएँ, जोसँग व्यवहारमा यी सबै हुन्छ । म मान्छु, मेरा कुनैपनि महिला साथीहरुले हस्तमैथुन गरेनन् । त्यो उमेरमा त मैले पनि गरिन । म सोच्थे कि यो अश्लील हो, यसले मेरो गुप्तांग विकृत हुनेछ ।
म विगतलाई कोट्याउन चाहन्छु । जहाँ हना डराएकी किशोरी हुन् र उनी कोठामा गएर आफैँलाई छुन भनिरहेकी छिन् । तर, यस्तो गर्नका लागि पनि बर्षौंको प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो । २० वर्षको उमेरमा पनि मैले यस्तो गर्न सकिन । त्यसपछि मात्र मैले पहिलो यौनसुख प्राप्त भयो । मलाई लाग्थ्यो कि महिला हस्तमैथुन केही अनौठो किसिमको हुन्छ ।
किन हाम्रो शरीर र त्यसका लागि यौन सुख एक आधारभूत आवश्यक्ता हो भन्ने बुझ्दैनौं । हामीलाई चित्रको माध्यमबाट लिंग र भजाइना देखाइएको थियो । तर, भजाइनाको बारेमा बताइएको थिएन । के अधिकांश मान्छे आफ्नो गुप्ताङ्गको बारेमा नबुझी नै ठूला भएका हुन्छन् ।
पोर्नमा केवल यौन उत्तेजना महसुस गर्न सकिन्छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्छ कि युवाहरु अलग अलग तरिकाले यौन सुख प्राप्त गर्छन् । युवाहरुले आफ्नो गुप्ताङ्गको बारेमा जान्नुपर्छ । उनीहरुले मूलधारको पोर्नमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन । मान्छेमा यौनसँग सम्बन्धित भ्रम, लाज, पछुतो पनि बाँचिरहेको छ ।
हस्तमैथुनको बारेमा खुला चर्चा गर्न थालेपछि मैले पाएँ कि, धेरैजसोले किशोरवयमा हस्तमैथुन गरेका थिएनन् । किनभने यो उमेरमा यौनलाई लिएर हामीमा एक किसिमको लाज, ग्लानी हुन्छ । यो कुरा गलत हो भन्ने धारणा गहिरोसँग बसेको हुन्छ । यौनजन्य गतिविधि गर्नु घृणित हो भन्ने बुझ्छन् ।
१५ वर्षको उमेरमा मलाई मेरी आमाले हस्तमैथुनको बारेमा बताएकी थिइन् । साथै हस्तमैथुन गर्नु सामान्य र स्वाभाविक हो भन्ने बुझाएकी थिइन् । साथसाथै हस्तमैथुन गरेपछि आफुलाई कसरी सबैभन्दा राम्रो तरिकाले यौन सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ । विवाहपछि यौनसुख प्राप्त गर्नका लागि विवाह अघि हस्तमैथुन गर्नु उचित हुने कुरा गरेकी थिइन् । यतिबेला मेरो जवाफ थियो, ‘आमा मसँग यस्तो कुरा नगर्नुहोला ।’ तर, कम्तीमा उनले प्रयास गरे र मलाई अहिले राम्रो लग्यो ।
महिला हस्तमैथुनका सम्बन्धमा चारैतिर मौनता छ । यो एक हानिकारक मान्यता हो कि, महिला कामुक हुँदैनन् । म यसलाई बकवास भन्छु । महिला पनि कामुक हुन्छन् । महिलामा पनि पुरुषमा जस्तै यौन इच्छा हुन्छ । उनीहरु पनि पुरुषले जस्तै यौनसुख लिन चाहन्छन् ।
हामी कहिले काहीँ यस्तो यौन सुख लिन रुचाउँछौं, जहाँ हामी नितान्त एक्लो हुन्छौं । त्यहाँ कोही नहोस् । यति लामो समयपछि म आफ्नो देहसँग एकदमै सहज छु । म आफैले आफैबाट यौनसुख प्राप्त गर्न सक्छु । म आफ्नो पार्टनरबाट के चाहन्छु रु यस सम्बन्धमा पनि मसँग आत्मविश्वास छ । हरेकको कामुक अलग अलग तरिकाको हुन्छ ।
मलाई लाग्छ, हस्तमैथुन सबैभन्दा सहज र सुरक्षित तरिका हो । कुनैपनि किसिमको स्पर्शबाट तपाईं यौन सुख लिन सक्नुहुन्छ । यसले अरुलाई कुनै हानी गर्दैन । अरुलाई असर गर्दैन ।
राम्रो निद्रा र तनावमुक्ती
हस्तमैथुनले केही ओखतीको काम पनि गर्छ । यसबाट तपाईंले गहिरो निद्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । साथै तनावबाट मुक्त पनि रहन सक्नुहुन्छ । अरु औषधिबाट यस्तो कुरा सहजै प्राप्त हुँदैन, जुन हस्तमैथुनबाट हुन्छ । यसका लागि यौन उत्तेजनालाई बुझ्ने कक्षा हुनुपर्छ । हस्तमैथुनले तपाईं र तपाईंको यौनजीवनलाई अरु सशक्त बनाउँछ । बिबिसीबाट
२४ घन्टामा थपिए ३,३८३ संक्रमित, २४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता थप (आदेशसहित)
फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण बढ्यो, भरिए उपत्यकाका अस्पताल
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- ‘खोप केन्द्रबाटै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो, व्यवस्थित बनाऊ’
काठमाडौंमा भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज साउन २२ गतेदेखि दिइने
गोकर्णेश्वर ४ सहयोगी मा वि मा आज एक दिनको लागि कोभिड विरुद्दको खोप संचालन हुने
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भेरोसेल खोप कार्यक्रम आजबाट स्थगित
बाढी/पहिरो आउने सम्भावना कायमै रहेकोले उच्च जोखिमका घरमा नबस्न मेलम्ची नगरपालिकाको अपिल
२० श्रावण २०७८, बुधबार १०:१५
न्युयोर्कका गभर्नरद्धारा ११ महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०९:५५
सत्ता गठबन्धनको कार्यदल बैठक आज पनि बस्दै,न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०९:२५
एनआरएनए चेक गणतन्त्रको उपाध्यक्षमा लामा,नेपालीहरुको पीडामा मलम लगाउनु पहिलो प्राथमिकता
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार २३:०६
भेनसले भित्र्यायो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको के १२ कोर्स,आईटीमा अब्बल बनाउँने लक्ष
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार २२:१०
नागरिक निगरानी, असोज २०७७
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार २०:४७
गोकर्णेश्वरद्धारा आफ्नै नगर स्काउट समिती गठन,संयोजकमा सुरेश कुमार खड्का
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार २०:१४
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १८:२७
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १८:०७
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १७:५३
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १७:३०
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १७:१६
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार १६:५३
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने पूर्व कप्तान पारस खड्काको घोषणा
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०८:५३